Fizarana sosialim-bahoaka: vehivavy 11 avy naka Tosika fameno, voaroban’ny jiolahy | NewsMada
Par Taratra sur 15/08/2020
Tao anatin’izay dimy andro nizarana ny Tosika fameno , fanampiana ireo sahirana ara-pivelomana sy marefo eto Toamasina izay, efa nahatratra 11 ireo renim-pianakaviana voaroban’ny jiolahy. Nafoy ny vola 100 000 Ar.
Tsy nisy azo atao fa dia nafoy ilay vola fanampiana 100 000 Ar. Ny famonjena filaharana mandritra ny tontolo andro anefa efa tena mafotaka. Tao anatin’izay fotoana izay dimy andro izay tokoa, hita ho nirongatra tokoa ny asan-jiolahy, ny fandrobana, ny fanafihana etsy sy eroa ao an-drenivohitr’i To­a­masina. Lasibatra amin’ izany, indrindra indrindra ny vehivavy sy renim-pianakaviana.
Efa alina ny fizarana
Eo amin’ny kianja fanaovam-baolina an’ny kaominina no nanaovana ny fizarana ny Tosika fameno. Vao mihodina kely eo, na koa efa eny anatina posiposy na bajaj no tena hitrangan’ny fandrobana. Raha ny fanadihadiana, noho ny fahamarian’ny olona mpisitraka izany, saiky hatramin’ny alina no hizarana ilay fanampiana. Vao mainka toa manome vahana ny mpanao ratsy izany, satria tara vao tafavoaka ao. Manginy fotsiny ny fahatapahan-jiro lavareny ao an-tampon-tanànan’i Toamasina.
Manao ny ataony ny sefo fokontany sasany
Fantatra fa efa nandray ny andraikiny manoloana ireo tranga ireo ihany ny mpitandro filaminana amin’ny alalan’ny fametrahana polisy manodidina ny kianja, saingy tsy mahasakana ireo mpanao ratsy izany. “Ny ratsy tokoa tsy kely lalana”, araka ny fitenenana.
Toy ny any amin’ny faritra hafa, misy koa ny fitarainan’ny olona amin’ny afitsoky ny sefom-pokontany sasany, amin’ny fampidirana anaran’olona anaty lisitra.